देशको बिरामीपन र औषधी - A complete Nepali news portal based on news & views
२६ असार २०७६, बिहीबार ०९:११ July 12, 2019 Nonstop Khabar
‘देश बिरामी पर्यो हजुर ! झर्किने, झुक्किने, बिर्सने, बर्बराउने, ढाट्ने, जिम्मेवार पदमा बसेकाले जनतालाई तथानाम गाली गर्ने र ठुल्ठुला कुरा गर्ने तर व्यबहारमा माखो नमार्ने जस्ता लक्षणहरु देखा परे, लौन जनता ओखती- मुलोको खोजी गरम !” आज बिहानै एकजना बुज्रुकले मलाई घचघच्याउनु भयाे । मैले स्वीकृतिपूर्बक मुन्टो हल्लाउदै एउटा दृष्टान्त सम्झन लागे ।
एकादेशमा सचिवले मन्त्रीलाई झुक्याएछन् । ती मन्त्रीले पनि अर्को मन्त्रीलाई घुर्क्याउँदै झुक्याएछन् । क्याबिनेटको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि झुक्याइएछ । अनि उहाँ झोक्किनु भएछ ।त्यसपछि अरु मन्त्रीहरु झोक्राउनु भएछ । लास्टाँ सबै मिलेर जनतालाई झुक्याएछन् । यो कथा कहाँको हो, तपाईहरुलाई थाहा नै छ।
भारतबाट नेपालमा जनता सिध्याउन प्रवेश गर्न लागेका घिरौला, लौका, करेला बिषालु मिसाइल र टमाटर, स्याउ फर्सी पनि बिषालु बम जस्तै हुने भएका छन । हाम्रो राष्ट्रवादी सरकारले नाका खोलीसकेको छ। दूतावासको एउटा चिठीले सरकारको राष्ट्रवादी जामा ह्वाङ्गै खुस्काईदियो। अब नागरिक अवज्ञाको विकल्प छैन। भ्रष्टाचारी, ढटुवा राष्ट्रघाती नेताहरूलाई बहिष्कार र आफुलाई आवश्यक कृषि उपज आफै उत्पादन गर्नुपर्छ। अलिकति बारीको पाटो हुनेले जग्गा खाली नराखौ । बारी नहुनेले पनि करेसाबारी बनाऔ र घरमा गमला, बाल्टी आदिमा पनि माटो/ मल राखेर तरकारी खेती गरौ। यसो गर्दा स्वस्थ्य खान पनि पाइन्छ भने किनेर खानुपर्दा पनि स्वच्छ तरकारी किन्न पाइन्छ। नेपालकै कर्णालीको स्याउले बजार पायो भने सायद बिदेशबाट स्याउ आयात गर्नै पर्दैन। देशमा उत्पादन सहितको विशाल किसान जागरण आवश्यक छ र कृषि उपजको परनिर्भरता पूरै खारेज हुनुपर्छ । यसकाे निम्ति सरकारमा बस्नेहरुप्रति व्यापक खबरदारी र दवाब बढाउनु पर्छ। सचेत, जागरुक जनताले मात्र राष्ट्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्छन। त्यसैले जनता :- होसियार, होसियार, होसियार !
सरकार आजभोलि के चाहन्छ, स्पष्ट छ । उ चाहन्छ : उसका सबै कुरा सबै जनताले हुबहु मानिदिउन । ऋणको भारीले थिचिएका किसानले उसैको गीत गाइदिउन । भनून कि- सरकार जिन्दावाद। नेपाली संस्कृतिप्रेमी जनताले भनिदिउन – गुठी विधेयक लागू गर । साहित्यकार, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूले त झन सरकार झुक्किएको, बिर्सिएको ढाँटेको ख्यालै नगरुन। उनीहरु त रक्सीले वा गाँजाले लठ्ठ भएको लठ्ठक जस्तै सरकारको जयजयकार गरिरहुन् । मान्छे पक्रेर पेस्तोल दागेर मार्दा होस् वा झुक्किदा सरकारले ल्याएको रेडिमेड जवाफमा चित्त बुझाउन र कसैले चाइचुइ नगरोस् । खबरदारी गर्ने सचेत नागरिक वा यो त भएन है सरकार भन्नेहरूलाई सडक वा घरबाटै घिसारेर लाँदा समेत बिरोध नआओस र नारा घन्किरहोस – देशमा शान्ति छ, सुख छ, समृद्धि छ, सरकार जिन्दावाद !
रेल, पानीजहाज, स्याटलाइट र हावाबाट निस्कने बिजुलीका कुरा त भजन संहिता नै बनोस । सरकारको समर्थनको निम्ति धुँवा, धुलाेले आक्रान्त भए पनि मास्क लगाउने धृष्टता नहोस् । नेपालमा जन्म मात्र लिएका र बाहिरबाट आएका शरणार्थी समेत सबैलाई नागरिकता दिने विषयको छुस्स बिरोध नहोस् । कतैबाट बिरोधको स्वर आयो भने तुरुन्त सरकारी अरिङ्गालहरु जाइलागून र निमिट्यान्न पारुन । सीमाबाट नेपाल छिर्ने विषाक्त तरकारी बोकेका ट्रक निर्बिवाद नेपाल प्रवेश गरुन । नेपाली जनता रोगी र अपाङ्ग बनून, बाल मतलब भएन । सत्ताधारी मन्त्रीहरुले बिदेशीको हुन्डी खाएर विना तयारी लाइन लगाइएका एकपछि अर्को विधेयकप्रति सबै बुद्धिजीवीहरु मौन रहून्। सबैले भनिदिउन्, ‘यो सबै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका लागि हो ।’
तर, यस्तो भएको छैन, सचेत नागरिक पहलकदमीका कारण सरकार एकपछि अनेकौ पटक बेइज्जतीपूर्वक पछाडि फर्केको छ । मलाई लाग्छ, सरकार भित्र रहेका दलालहरु अर्को कुनै भयंकर अवसरको खोजीमा छन । त्यो अवसर सामाजिक फासिवादको चरम प्रयोग हुनसक्छ । अन्त्यमा बिरोधीहरुलाई कत्लेआम गरेर भए पनि फासीवादीहरु आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने तर्फ लाग्न सक्छन।जसरी रुमानियाका चाउचेस्कुलाई हटाउन जनविद्रोह भएको थियो, नेपालमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ ।
अन्त्यमा यो दुई तिहाइको सरकार बनेदेखि अहिलेसम्मका प्रतिनिधिमूलक काण्डहरुका फेरहस्त पेश गर्दछु:-
१) निर्माला बलात्कार काण्ड- पीडितलाई न्याय दिन असफल ।
२) वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्ड- भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति, सबैले बाँडीचुडी खाए ।
३) गुठी बिधेयक काण्ड:- भू-माफियाको जवरजस्त प्रभाव र नेपालको सांस्कृतिक धरोहर सिध्याउन खोज्नेहरुको मोहजालमा सरकार।
४) कोरियन होली वाइन काण्ड:-एउटा बेतुक र वाहियात कार्यक्रममा सरकारको लम्पट सहभागिता ।
५) फेक इन्काउन्टर काण्ड:- देशमा गृहयुद्धको खतरा ।
६) आइफा एवार्ड काण्ड:- नेपालको सार्बभौमसत्तामा असर पुग्ने गरि एउटा ब्यापारी प्राइभेट सँस्था सँग सरकारले सम्झौता गर्न तयार हुनु ।
७) विषादी तरकारी काण्ड:-भारतबाट आउने विषादी तरकारी, फलफूलमा चेकजाँच निषेध, नेपाल सरकारको हुतिहारा पन ।
८) नागरिकता बिधेयक काण्ड :- नेपालमा जन्मेको सबैलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने प्रस्ताव, भारतीय प्रभावमा बिधेयक।
९) लोकसेवाको सुचना सुचारु गर्ने/नगर्ने प्रकरण :-लोकसेवालाई वैज्ञानिक बनाउनुको सट्टा धारासायी बनाउने संसदीय दुस्प्रयास ।
१०) एनसेल करछली काण्ड:- राज्य मातहतको दुर संन्चारलाई टाट फर्काउने, निजी बिदेशी कम्पनी पोस्ने र राजस्व समेत मारेर देशघात गर्ने। चुनावी सहयोगको नाममा नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुले अकुत चन्दा लिएको ।
११) ३३ किलाे लगायत ३८ क्वीन्टल सुन काण्ड:- मुख्य अभियुक्तलाई कारबाही गर्न असफल केही भरियाहरुलाई मात्र कारबाही ।
१२) मिडिया विधेयक काण्ड:- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि सरकारी बन्देजको योजनाबद्ध प्रयास।
(यी वाहेक सानतिना जोकिङ खालका कुर्सी काण्ड, मास्क काण्ड आदि )
अब पनि कति काण्ड मच्चाउने हो, घडा अझै भरिएन र ? जनता नजागे देश भड्खालोमा जाने सुनिश्चित छ। जनताको सचेत पहलकदमी नै हरेक समस्यहरुको औषधी हो।